नाकाबन्दी खोल्ने खाडी मुलुकको शर्तमा कतारले के जबाफ दियो ? तनाव झन् बढ्ने संकेत - Enepalese.com
नाकाबन्दी खोल्ने खाडी मुलुकको शर्तमा कतारले के जबाफ दियो ? तनाव झन् बढ्ने संकेत
इनेप्लिज २०७४ असार २२ गते २३:३८ मा प्रकाशित
उता इजिप्टले यसै बिषयमा बुधबार इजिप्टको राजधानी कायरोमा यी चार देशका विदेशमन्त्री स्तरमा बैठकको आयोजना गरेको छ । सोही बैठकमा यस कतारको जवाफी पत्रका बारेमा छलफल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । रासस/सिन्ह्वा